General Category April 23, 2016April 23, 2016BEEKAN GULUMMAA IRRANAA
Dhaloonni dhiiga keessa daa’imee guddate alagaaf harka hin laatu! –
Dhalli Oromoo kamiyyuu gaafa dachee kanatti dhufe, dhiiga maatii fi lammii isaa lola’u lafatti ilaalaa addunyaa kanaan wal bare. Baga nagaan dhufteen isaanii dhiigaan ta’aa ture. Har’as kan dhalachaa jiran waanum walfaakkaatutu isaan mudachaa jira. Yoo rafanis, deemanis, dhiigatu fuula isaanii dura lola’a. Dhaloonni du’a abjootaa deemu jechaadha. Lafee wiirtuu dugdaa isaaniitu suukannaa’aa deema. Sababnisaa lafee qomoo isaaniitu rukuttaan daakamaa jira. Gaafa abbaa fi haati isaanii gadi fuudhamanii oobdii mana isaanii keessatti tumaman ilaalaa guddatu. Gaafa rasaasaan isaan duratti rukutanii ajjeesan illee ni argu. Dhaloonni akkasitti guddatan kun maal karoorsaa akka jiran dhiigi dhangala’aa jiru salphaatti nutti hima. Wayyaanota biratti dhiigni afaan kan hin qabne yoo ta’eyyuu, seerri uumaa akka jedhutti dhiigni afaan qaba, ni dubbatas.
← DHALOOTA DHIIGAA!
LAKKII NATTI HAHAFU →